အနှစ်ရှာရင်း အကာပစ်နိုင်ကြပါစေ - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
Posted by ukkmaung on May 11, 2020 at 10:54am
ဘ၀မှာ​ဘုရားနဲ့​တွေ့လို့ ငြိမ်းချမ်းမူ့  ရတာ မဟုတ်​ပါဘူး..။ ငြိမ်းချမ်းသွားလို့သာ ဘုရားနဲ့​ တွေ့တာပါလို့​ ဆရာအိုရှိုးက​ ပြောဖူးတာပဲ၊၊ မြတ်ဗုဒ္ဓကလည်း မိန့်​ဖူးတာပဲ၊ သူ့ရဲ့တပည့်ဝက္ကလိဆိုတဲ့ ရဟန်းကို “တရားကို မြင်​မှ ဘုရားကို မြင်​မယ်..​”ဆိုတာ၊ ဒါ​တွေဟာ လက်​​တွေ့ကျတဲ့ ဘဝရဲ့​နေထိုင်​မူ့ဟန်​ဆိုင်​ရာ ပြဿနာ ချဉ်းကပ်​မူ့​တွေပါ။
ကြည့်​ကြည့်​ပါ ၊ ကမ္ဘာမှာ​ ရေတွက်​မနိုင်​တဲ့ နတ်​ဘုရား​တွေ ၊သူတို့ စံပယ်​တယ်​ဆိုတဲ့ စကြာဝဠာအရပ်ရပ်က ဘုံနန်း​တွေ ၊ ရှုပ်​​ထွေး​ပွေလီတဲ့ ဘာသာ​ရေးယုံကြည်​မူ့နဲ့ လုပ်​ထုံး​လုပ်နည်းတွေ ၊ အများကြီးမှအများကြီးပဲ၊ အနှီဘာသာ​ရေးဆိုတာ​တွေထဲမှာကို ဂိုဏ်း​တွေက so many ကွဲ​နေ​သေး၊ ၀ိနည်းနဲ့  ယဇ်​ပုံစံ​တွေက အ​သေင်္ချ ရှိကြ​သေး ၊ ကမ္မဌာန်း ထိုင်​နည်း​တွေ ၊ ဆု​တောင်း​တွေ ၊ ကပ်ကျော် ၊ လာဘ်ခေါ်ဂါထာမန္တာန်​​တွေလည်း အများကြီး၊ သူတို့ရှိ​နေတာလည်း နှစ်​​ထောင်​ချီ​နေပြီ။
ဘာသာ​ရေးနယ်​က ဆရာဂုရု၊ ဆာဒူး၊ ဘုန်းကြီး​တွေ၊ ရ​သေ့​ ၊ ယောဂီ ၊ တပဿီ​တွေလည်း​ ဟောရင်းသာ ပြန်လွန်​​တော်​မူကုန်​ကြတာ သူတို့သင်္ချိင်း​တွေ​က နေရာအနှံ့ ၊ များလိုက်​တဲ့သာသနိက (ဘယ်​သီးခြား ဘာသာ​ရေး အ​ဆောက်​အဦမှ မရည်​ရွယ်​)​ နေရာ​တွေလည်း ကမ္ဘာ့နိုင်​ငံတိုင်းလိုလိုပဲ၊​ ခေါင်း​လောင်းထိုးသံ၊​ ကြေးစည်​ထုသံ၊ ဆည်းလည်းသံ​တွေလည်းတ​​ဝေဝေ ၊ တစီစီနဲ့၊ ဘာသာ​ရေး ဆရာ​တွေ​ နေထိုင်​သီတင်းသုံးရာ နန်းတော်တမျှ ကျောင်း​တော်​တွေလည်း လက်​ညှိးထိုး မလွဲဘူး။
ဒါ​ပေမယ့်​ ခုထိလူ​တွေ ဘာမှား​နေကြသလဲ မသိဘူး၊ ​လောဘ၊​ ဒေါသ၊ ဣဿာ၊ မစ္ဆရိယ၊ မာန်​မာန​တွေ ထက်သန်​​နေတုန်း၊ ကာမတဏှာ၊ ဘဝတဏှာတွေလည်း ပိုပိုများ​နေတုန်းဆို​တော့ ကျ​နော်တို့ဟာ ဆင်​တစ်ကောင်​လုံး​ တွေ့​နေရက်​နဲ့ ဆင်​​ခြေရာ လိုက်​ရှာ​နေကြသူ​တွေနဲ့ တူ​နေတယ်​လို့ပဲ ရိုးသားစွာမြင်​မိတယ်။​
ဥပမာ။ ။ သာမန်လူတစ်ယောက် အတွေးပေါ့လေ။ မနက်​​စော​စော ဘုရားသွားတယ်​၊ ကိုယ့်​ဂြိုလ်​တိုင်​မှာ​ ရေသပ္ပါယ်​ ဆု​တောင်းမယ်​၊ အမျှ​ဝေပြီး အလှုခံပုံးထဲ​ ငွေစတစ်​ချို့ ထည့်​လှူမယ်​၊​ နောက်​ပြီး ဘုရားက ပြန်​ဆင်းလာမယ်​၊ လုပ်​ငန်းခွင်​ထဲ၊ မိသားစုထဲ ပြန်​ဝင်​တာနဲ့ ခုနက ဗုဒ္ဓါနုဿတိဟာ​ ပျောက်​ခြင်းမလှ​ ပျောက်​သွားပါပြီ၊ တရားစခန်း​တွေ ဝင်​မယ်​၊ ဥပုပ်​သီလ​ စောင့်​မယ်​လို့ ဆိုကြတယ်​၊ တရားစခန်းက ထွက်​တာနဲ့ ဥပုသ်နေ့ လွန်​တာနဲ့ ခုနရခဲ့တဲ့ သတိပဌာန်​နဲ့ ဝါရိတ္တသီလက​ မေ့​ပျောက်​သွား​တော့တာပဲ။ တခြားတခြား သာမန်ordinary ဘာသာဝင်တွေလည်း ဘာထူးလဲ? ဘုရားကျောင်းတွေ ၊ ၀တ်ပြုနတ်နန်းနဲ့  ဗလီတွေကနေ အပြင်ပြန်ရောက်တာနဲ့  ဘုရားတခြား လူတခြား ဖြစ်သွားတတ်ကြသေးတာကလား?
ဒါဘာ့​ကြောင့်​လဲ​ တွေးမိတယ်​၊ ​လောကမှာ မတရားမူ့ အများကြီးရှိသူ တစ်ချို့က ဘုရားကို ပိုဖက်​တယ်​၊​ တစ်ချို့ ဝိဘဝတဏှာ အရာမှာ လောဘကြီးသူက ပိုလှူတယ်​လို့ စိတ်ခွဲပညာ ရှုထောင့်က သုံးသပ်​ကြတာ ရှိတယ်။ မတရားမူ့များ​တော့ ခုဘဝ ကံမ​ကောင်းမှာ ​ကြောက်​တယ်​။​ နောက်​ဘဝ ဂတိမ​ကောင်းမှာ စိုးတယ်​။ ဒီ​တော့ ဘုရားနဲ့ နီး​အောင် ​မသိစိတ်​က တွန်းပို့​ပေးမူ့အရ​ ပြုလုပ်နေကြတယ်​။ ​ဖြတ်လမ်းနည်းတွေ ရသလောက် သုံးလာကြတယ်။ လောဘကြီးသူက ​သောက်​​လေ​သောက်​​လေ ငတ်​မ​ပြေ ပင်​လယ်ရေနဲ့ တူတဲ့ ဓနဗလ၊​ဘောဂဗလမှာ သာယာနေကြတယ်​။
သူ့အတွက်​ ဘယ်​လက်​က တဆုပ်​ကြဲရင် ညာလက်​က တစ်​လှည်​ဝင်​ ဆိုတာ နား​သောတ အရသာ အစစ်​ပဲ၊​ညောင်​​စေ့​လောက်​လှုပြီး​ ညောင်​ပင်​​လောက်​ရ ဆိုတဲ့ capitalist investment မှာ သာယာတယ်​၊ ဒါ့​ကြောင့်​လှုတာ​တောင်​ နဲနဲရင်း များများမြတ်​ပဲ​ ရွေးချယ်​တယ်​။ ဂန္ဓီ​ပြောဖူးတဲ့ သဘာဝလောကဟာ လူတို့လိုအပ်​ချက်​အတွက်​ လုံ​လောက်​​ပေမယ့်​ အလို​လောဘအတွက်​​တော့ မဖြည့်​ဆည်းနို​င်​ဘူး (Nature had enough for everybody's needs but not for everybody's greed) ဆိုတာ​လေး သတိရတယ်​။
#ဘာသာတရားဟာ ရိုးရိုးသားသား ပြောရရင် လူသား ပေါ်ပေါက်ပြီးမှ ရလာတဲ့ အမွေ ဖြစ်ပါတယ် ၊(human being precedes religion)၊ ဘာသာ​ရေးကို လူ​တွေပဲ ဖန်​တီးတယ်​၊​ နောက်​ သူတို့ကပဲ ဖျက်​စီးကြတယ်။​၊ ခရတ်ရှနား၊ မဟာဝီရ၊ ဗုဒ္ဓ၊ ခရစ်​​တော်​၊ မယ်တော်မာရီတို့ရဲ့ ရုပ်​ပွား​တွေ ပုံ​တော်​​တွေ​ ရှေ့မှာတင်​ မျက်​နှာကို အိုးမဲသုတ်​ရက်​သူ​တွေ ရှိနေပြန်​တယ်​၊ လက်​​တွေ့ချဉ်းကပ်​ဘဝ​ နေထိုင်​မူ့ ရှာ​ဖွေချင်​ရင်​​တော့ ကျ​နော်​တို့ အခွံတွေ ၊ ဟန်​​ဆောင်​ပန်​​ဆောင်​ ဘာသာ​ရေးယုံကြည်​မူ့​တွေက​နေ​ ဝေးရာကို သွားသင့်​တယ်​ ထင်​တယ်။​
#အိုရှိူးကတော့ ဘယ်ဂိုဏ်းဂဏ မျက်နှာမှ မကြည့်ဘဲ လူတွေကို ခုလို ဆုံးမခဲ့တယ်။
#ဒါကြောင့်လည်း ဘာသာရေး ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေက သူ့ကို သတ်ပစ်ချင်လောက်သည်အထိ မုန်းကြတယ်။
ကျ​နော်​တို့ ဘုရား​တွေ၊ မအို မနာ မ​သေရာ ဘုံ​တွေ၊ ဓါတ်​သ​ဘော၊ အသင်္ခတတရား စတာ​တွေ ရှာ​နေခဲ့တာ နှစ်ပရိ​စ္ဆေဒ မနည်း​တော့ဘူး​လေ၊ ခုနက ဥဒါဟရုဏ်​လို ဆင်​​ကောင်​ကြီး​ရှေ့​ တွေ့​နေရက်နဲ့​ ဆင်​​ခြေရာ ရှာနေသလိုပါပဲ။ လူအများစုလည်း အ၀ိဇ္ဇာနဲ့ တဏှာ ရမ္မက်နယ်​မှာ တ၀ဲဝဲလည်​​နေဆဲ၊ လူလူချင်း ထားအပ်​တဲ့ ဗြဟ္မစိုရ်​နဲ့ လူသားစိတ်​ထားကို​တောင်​ တစ်​ချို့မထားနိုင်​တာ ရှိနေသေးတယ်​၊။
ဘယ့်​နှယ့်​လို့ ဘုရားနဲ့ ပိုနီးမလဲ? ဘယ်​လိုလုပ်​ပြီး လက်​​တွေ့ဝ သံသရာဆင်းရဲ ဆိုတဲ့​​သောက ၊ ဗျာပါဒ ဒေါမနဿ ဖြစ်​ရမူ့က​နေ ကင်းမလဲ? ​တွေးမိတယ်​။
သံယုတ်ပါဠိထဲက လောဟိတဿသုတ်​မှာ ဗုဒ္ဓ​ဟောဖူးသလို "မိမိဆီမှာ (တိတိကျကျ ဆိုရင်​ တစ်​လံမျှ ပမာဏရှိတဲ့ ကိုယ်​ခန္ဓာမှာ) ပဲ​ လောကရဲ့ ဒုက္ခနဲ့ အနှီဒုက္ခ လွတ်​ရာကို ရှာသင့်​တယ်​' ထင်​ပါတယ်​။ ပြင်​ပ ဗဟိဒ္ဓ​ သာသနိက တွေမှာသာ ငြိမ်း​အေးရာ ရှိတာ အမှန်​ဆိုရင်​​ ဂေါပကလူကြီး​တွေ ၊ ကပ္ပိယနဲ့ ဘုရားက တံခါး​စောင့်တွေ အားလုံး နိဗ္ဗာန်​ဝင်​ဖို့ ရှိ​တော့တယ်။ အဓိက ကတော့ ကျနော်တို့ နှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ လိုရင်းရယ် ၊ ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ ဝက္ကလိသုတ်ထဲက တရားလေး ပြန်ညွှန်းမယ်..
အိုရှိူးလည်း ဒါကိုပဲ ရည်ညွန်းခဲ့ပါတယ်။
#Osho #Recall edited